Monday October 11, 2021 - 17:12:15 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warbaahinta maamulka Yuhuuda ayaa shaaca ka qaadey in dowlada Mareykanka ay cadaadis saareyso madaxda dalka Sudan, iyadoo ku qasbeysa dib u hagaajinta xiriirka diplomasiyaded ee dalkan kala dhexeyo mamulka Gumeysiga.
TV maxali ah oo ku hadla luuqada Cibriga ayaa si rasmi ah u shegay, in Joe Biden iyo Maamulkiisa ay cunaqabateyn ugu hanbaen madaxda Xukumada Khartoum, xilli dalka Sudan uu la daala dhacayo dhaqaale dare aad u baahsan, taas oo sameyn ku yeelatay dadka iyo duunyada ku dhaqan, Miyiga iyo magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi.
Hadafka laga leeyahay cadaadiskan ayaa ah, In Xukumada uu hogamiyo Cabdalla Xamduuk lagu qasbo inay heshisyo kala duwan la saxiixato Mamulka Yuhuuda, taas oo ay ugu muhiimsan tahay caadiyeynta cilaaqaadka labada maamul, iyadoo ay xusid mudan tahy, in Sudan ay kamid ah Wadamo carbed oo afar ah, oo horey ugu dhawaqay, inay dib usoo nooleeyeen xiriirka kala dhexeyo gumeystaha xooga ku heysto dhulka Falastiin.
TV-ga Kaan ayaa galabki axada shegay, in Washington ay kor u qadaaday cadaadiska siyaasaded ee ay sareyso xukumada Khartoum, taas o dhawan ka badbaaday isku day afgambi ah, hadalkan ayaana imaanaya, Sanad kadib marki uu Burhaan ku dhawaqay, dhaqan gelinta heshiski qarniga, kaas oo ay garwadeyn ka aheyd dowlada Mareykanka.
Dadka sida gaarka ah ula socda arimaha dalka Sudan ayaa shegaya, In heshiiski la saxiixay sanad ka hor uu ka dhaqan gali la,yahy khilaafka siyaasaded ee ka dhex taagan Sarakisha military-ga ee talada wadanka haya iyo Waaxaha Madaniga ah, taas oo banaanka soo dhigtay cadaadiska ay Washington ku heyso madaxda dalka sudan.
Inkastoo aan la ehyn jawab rasmi ah oo kazoo baxday madaxda dalka Sudan oo ku aadan arintan, hadana waxaa iska cad fara galinta ay dowlada Mareykanka ku heyso dalkan, taas oo horey ugu dartay liiska waxa ay ugu yeeraan argagixisada, Dalka Sudan ayaana fowdo lugaha kula jira, tan iyo wixii ka danbeyey marki ay dilaaceen kacdoonadi guga carabta, waxana ka dhacay ilaa 3 afgambi oo mid kamid ah uu guleystay, halka labada kalena ay fashil kusoo dhamaden.
Bishi August sanadki 2019ka, ayaa xilka laga tuuray cumar xasan Al Bashir, waxaana lasoo dhisay xukumad madani ah oo dalka maamuli doonta 4 sano iyo dhowr bil, taas oo ay hogaminayaan gole shuuro oo ka kooban ilaa 14 xubnood, kuwaas oo isugu jira 5 ka socda military-ga, 6 xubnod oo matalaya hey’adaha shacabka iyo 3 Xubnood oo ka socda Jabhadi mucaradka ee heshiska la galay xukumada, dhamaan xubnahan ayaana kukala aragti duwan, qaabka loola macaamilayo maamulka Yuhuuda ee xooga ku heysto dhulka Falastin.
Isbuuci lasoo dhaafay, Wafdi heer sare ah oo ka socda dowlada Sudan, kuwaas oo isugu jira Sarakil amni iyo kuwa ciidan ayaa gaaray Deegaanada gumeysiga, waxa ayna maamulka halkaasi ka jira kala hadlen, sida looga dhabeyn karo caadiyeynta cilaaqaadka labada daraf, sida lagasoo xigtay xafiiska RW Mamulka gumeysiga.
Sanadki 2020ka, Madaxweynihi hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa si rasmi ah ugu dhawaqay in Sudan ay heshis la saxixaty maamulka Yuhuuda, Si lamid ah Wadamada Imaratka, Baxreyn iyo Morocco, balse saansaantiisa ayaan wali laga daremin gudaha wadanka Sudan.
Dalalka Masar iyo Urdun ayaa horey cilaaqaad wanagsan ula lahaa gumeystaha, dowladaha carabta oo ka kooban ilaa 22, ayayna 6 kamid ah maamuladasi kaalinta hore ka galen, tartanka loogu jiro dhaqan gelinta heshiski qarniga, kaas oo sharciyad siinaya gumeystaha, si cadna kaga hor imaanaya halgan ay dadka Reer falastiin ugu jiraan xuriyadooda.
Wasiirka difaaca Mareykanka oo si yaab leh uga hadlay guuldarradii Afghanistan kasoo gaartay.